गर्भावस्थामा आमाले मुला खाए छोरा जन्मिन्छ : भ्रम कि यथार्थ ? - www.khabarkhurak.com
in जीवन शैली, हेडलाईन १
डा. थापा :यो सत्य होइन । गर्भवतीले खाने कुराले बच्चाको छालाको रंगमा प्रभाव पार्दैन । आमाबाबुको जिनको प्रभावले बच्चा कालो या गोरो हुने हो । आमा र बाबुमा हुने जिनले बच्चाको रङ निर्धारण गर्छ, यसमा क्रोमोजोमको भूमिका हुन्छ । आमा र बाबुमा हुने एक्स, वाई क्रोमोजोमको प्रतिशतको मात्राले बच्चा कति कालो या गोह्रो हुने भन्ने भूमिका खेल्ने हो ।
डा. थापा :जिनको प्रभाव बाबु र आमाकोमात्रै नभएर दुबैतर्फका अघिल्ला पुस्ताहरुको समेत पर्छ । अघिल्ला पुस्ताको जिनको प्रभावका कारण बच्चा आफ्ना आमा र बाबुभन्दा विल्कुल फरक रङको जन्मिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । जेनेटिकबाहेक कुनै रोग लागेर पनि यस्तो हुन्छ । त्यसो त जिनलाई वातावरणले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ । तर, वातावरणको प्रभाव स्पष्टसँग देखिन पुस्तौ समय लाग्छ । अमेरिकन÷युरोपियनहरु धेरै गोरो हुनु र अफ्रिकनहरु धेरै कालो हुनुको कारण जिनमा वातावरणसमेत प्रभाव पर्नु हो ।
डा. थापा :विश्वास गर्नु बेकार छ । गर्भको बच्चाको लिंग आमा–बाबुको शरीरको सेक्स क्रोमोजमले निर्धारण गर्दछ । मानव शरीरमा दुई थरी सेक्स क्रोमोजम हुन्छन् । स्त्रीलिंगी एक्स र पुरुषलिंगी वाई । यीमध्ये पुरुषको शरीरमा छोरी र छोरा हुने क्रमशः एक्स र वाई हुन्छन् भने महिलाको शरीरमा छोरी हुने वाई र वाई मात्रै । पुरुषबाट महिलामा एक्स क्रोमोजमको बिउ गए छोरी र वाई क्रोमोजमको बिउ गए छोरा जन्मिन्छ ।
आजको राशिफल,वि.सं.२०७५ साल पौष ०१ गते
सुत्नेबेला पेट थिचेर सुत्ने बानी छ ? यस्तो बानीले स्वास्थ्यमा हानी पुर्याउँछ